अन्तिम संस्कार हुनै लाग्दा आमा रोएको सुनेर ब्युँझिए किरन,घाटबाट फिर्ता गरि अस्पतालमा लागि उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए ! – Namaste Dainik
July 1, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अन्तिम संस्कार हुनै लाग्दा आमा रोएको सुनेर ब्युँझिए किरन,घाटबाट फिर्ता गरि अस्पतालमा लागि उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए !
काठमाडौं-आफ्नो अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेका बेला डाको छोडेर रोइरहेकी आमाको चित्कार सुनेर एक विरामी ब्युँझिएका छन्। यो छिमेकी देश भारतको कथा हो। तेलंगानामा ‘बे्रन डेथ’ घोषणा भएका १८ सालका एक किशोरले पुनः जीवन पाएका छन्। उनको अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेको थियो। त्यतिबेला उनकी आमा ठूलो स्वरमा रोइरहेकी थिइन्।
गंधम किरनकी आमा सैदम्माले भनिन,‘डाक्टरले छोराको हात समातेर भने कि उनी जिउँदैछन्। नाडी पनि चलिरहेको छ। त्यसपछि हाम्रो खुसीको सीमा नै रहेन।’